Zavatra Marina Foana Ampianarina | Mamaky Teny & Mampianatra
Zavatra Marina Foana Ampianarina
AHOANA IZANY? Tokony hampiasa fanazavana marina tsara ianao, mba tsy ho diso ny zavatra ampianarinao.
Mitadiava porofo marina tsara. Mitadiava porofo ao amin’ny Baiboly, dia izay no resaho. Vakio mihitsy ilay andininy, raha azo atao. Raha hiresaka lahatsoratra navoakan’ny mpahay siansa na vaovao na fanazavana hafa ianao, dia diniho aloha hoe tena marina ve ilay izy na mbola azo ampiasaina ve.
Tandremo sao diso ny fanazavanao. Eritrereto tsara hoe inona no tena hevitr’ilay andininy hohazavainao, rehefa jerena ny teny manodidina sy ny Baiboly manontolo ary ny zavatra efa noresahin’ny “mpanompo mendri-pitokisana sy malina.” (Mat. 24:45) Raha hampiasa fanazavana navoakan’olona ianao, dia aza ovana ilay izy fa izay tena nolazainy no resaho.
Aza manitatra rehefa mitantara zavatra na milaza isa. Tandremo sao lasa hoe “ny ankamaroan’ny olona” ny hoe “ny olona sasany”, na lasa hoe “matetika” ny hoe “indraindray.”
Hazavao tsara izay porofo ampiasainao. Ataovy azon’ny olona tsara ilay izy, na andinin-teny io na fanazavana hafa. Mametraha, ohatra, fanontaniana mety tsara, na manaova fanoharana.
Eritrereto mialoha hoe inona avy no fanontaniana mety hapetraky ny olona, dia ahoana no hamaliana azy. Ary ahoana raha misy manontany zavatra anao nefa tsy hainao ny valiny? Lazao hoe hikaroka momba an’ilay izy aloha ianao, dia hiverina amin’ny manaraka.
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Zavatra Marina Foana Ampianarina